ट्रम्पको आप्रवासी नीतिले नेपाललाई दिएको चेतावनी
» ट्रम्पको आप्रवासी नीतिले नेपाललाई दिएको चेतावनी
अमेरिकाका नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले जुन प्रकारको आप्रवासी नीति अपनाउने घोषणा गरेका छन्, त्यो नेपालका लागि पनि ठुलो चेतावनी हो । त्यसबाट शिक्षा लिएर नेपालले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा सुधारका लागि गम्भीर र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, भविष्य समेत अन्धकारमय हुने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपालले आफ्नो देशको आर्थिक विकासमा जोड दिएर आत्मनिर्भर हुने प्रयत्न गर्नुभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई विदेशमा पठाएर उनीहरूबाट आउने आम्दानीबाट देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रथमता नेपालीहरूले विदेशबाट जुन पैसा पठाउँछन्, त्यो देशको आर्थिक विकासमा कमै खर्च हुन्छ । त्यो पैसा अधिकतर रूपमा घरजग्गा किन्न वा उपभोग्य सामग्रीहरू किन्न नै खर्च हुन्छ । ती सामग्रीहरू अधिकतर विदेशबाट नै आयात गरिएका हुन्छन् । विदेशबाट आउने त्यस प्रकारको आम्दानीले जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो भागलाई श्रमबाट अलग गरी दिन्छ । उनीहरू गाउँबाट आएर सहरमा बस्दछन् र विलासी जीवन बिताउँछन् । परिणामस्वरूप पहाडका कृषियोग्य जमीन बाँझा हुँदै गई रहेका छन् । सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि त्यसबाट कैयौँ विकृतिहरू पैदा भई रहेका छन् र राजनीतिक रूपमा पनि त्यसका कैयौँ दूरगामी दुष्परिणामहरू हुने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ ।
पतिहरू लामो समयसम्म विदेशमा बस्दा उनीहरूको पारिवारिक समस्यामा कैयौँ विकृतिहरू ल्याएको कुरा कैयौँ अध्ययनले बताएका छन् । ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिर जाँदा देशको निर्माणमा लाग्ने ठुलो श्रमशक्ति बाहिर मात्र जान्न, देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने नागरिकहरू पनि बाहिर जान्छन् । युवक वर्गले देशको राजनीतिमा जुन सचेत भूमिका खेल्न सक्दथ्यो र पर्दथ्यो, त्यो भूमिका खेल्न सक्दैनन् । देशमा वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या लगातार र तीव्र गतिले कम हुँदै गई रहेकोले र उदार नागरिकतासम्बन्धी नीतिका कारणले ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू मुख्यतः भारतीय नेपालको नागरिक बन्दै गई रहेका छन् । त्यसले चुनावमा वास्तविक नेपालीहरूको मतदान वा भूमिका कम हुने र विदेशीहरूको अनुपात बढ्दै जाने खतरा बढ्दै छ । त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा स्वयं नेपालीहरू अल्पसङ्ख्यामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । त्यसको परिणाम कति गम्भीर हुने छ ? कसैले पनि अन्दाज गर्न सक्दछ ।
माथिको विवरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालीहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा विदेश पठाएर आर्थिक उपार्जन गर्ने वा देशको अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने जुन प्रयत्न गरिँदै छ, त्यो समस्याको स्थायी समाधान होइन । त्यसको विपरीत हाम्रो मुख्य जोड देशको आर्थिक विकास र देशको श्रमशक्तिलाई त्यसैमा प्रयोग गर्नेतिर जानु पर्दछ अन्यथा देशमा गम्भीर प्रकारको आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक सङ्कट पैदा हुने खतरा छ । अर्को शब्दमा देश तीव्र गतिले त्यस प्रकारको सङ्कटको मुखमा अग्रसर भई रहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै हामीले ट्रम्पको आप्रवासी नीतिलाई बुझ्नु पर्दछ र त्यसबाट शिक्षा लिनु पर्दछ ।
ट्रम्पको आप्रवास नीति उनको व्यक्तिगत लाइन मात्र होइन, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावमा हिलारी क्लिन्टनको हार र ट्रम्पको जितमा आप्रवास नीति पनि एउटा मुख्य कारण रह्यो । क्लिन्टनको आप्रवास नीति अपेक्षाकृत उदार थियो भने ट्रम्पको कडा र अनुदार । ट्रम्पको नीतिलाई बहुमत मिल्नुका पछाडि पँुजीवादभित्र विश्वव्यापी रूपमा र अमेरिकामा पनि बढ्दै गएको एउटा सङ्कटले पनि काम गरेको छ । पँुजीवादको विकास वा त्यसको स्थिरता नाफामाथि नै निर्भर गर्दछ । उनीहरूलाई ठुलो पैमानामा नाफा चाहिन्छ । त्यसका लागि ठुलो बजार चाहिन्छ । तर त्यसको समस्या यो हो कि त्यसको बजार झन्‌पछि झन् सङ्कुचित हुँदै गई रहेको छ । पहिले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरू पिछडिएका थिए । त्यस कारण अमेरिका वा युरोपका देशहरूलाई नाफा कमाउनका लागि ठुलो बजार थियो । तर अब एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूमा पँुजीवादको विकास भई रहेको छ । त्यसको परिणाम अमेरिका वा युरोपका देशहरूको बजार सीमित हुँदै गई रहेको छ । अर्कातिर, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका नयाँ पँुजीवादी देशहरूसित उनीहरूको अन्तर्विरोध बढ्दै गई रहेको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ, पहिले उनीहरूले जति सामान बिक्री गर्न सक्दथे, अब सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो उत्पादनमा कमी ल्याउनु पर्दछ । उत्पादनमा कमी ल्याउनुको अर्थ हुन्छ, अब उनीहरूलाई कम मजदुरहरू आवश्यक हुन्छ ।
उपर्युक्त प्रकारको अवस्थामा नै अमेरिका वा युरोपका देशहरूमा विदेशबाट आउने मजदुरहरूप्रति विरोध बढ्दै गई रहेको छ र आप्रवासी नीति कडा बनाउने माग बढ्दै गई रहेको छ । युरोपका देशहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासीहरू बस्दछन् । उनीहरूप्रति कडा नीति अपनाउने माग बढ्दै गई रहेको छ । आफ्नै देशका मजदुरहरू ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार हुँदै गएपछि ती देशहरूमा विदेशबाट आउने मजदुरहरूका विरुद्ध जनमत बढ्दै गई रहेको छ । जर्मनीको चान्सलरले आप्रवासप्रति केही उदार नीति अपनाइन् । त्यहाँका अनुदारवादीहरूले त्यो नीतिको विरोध गरे । त्यो उदार आप्रवासी नीतिको असर चुनावमा पर्‍यो । जर्मनीको एउटा राज्यमा भएको चुनावमा सत्तारूढ पार्टीको ठुलो हार भयो । त्यसबाट त्यहाँकी चान्सलरले पुनः आप्रवासी नीतिलाई कडा बनाउने कुरामा जोड दिइन् ।
अमेरिकामा ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासी छन् । यो भनिन्छ, त्यहाँ अबैध रूपले बसेका अप्रवासी मात्र एक करोड जति छन् । ट्रम्पले ४५ औँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तुरुन्त नै ३० लाख आप्रवासीलाई हटाउने घोषणा गरेका छन् ।पछि अरूलाई पनि हटाउँदै जाने र नयाँ भिसा नीति पनि कडा बनाउने उनको नीति हुने कुरा प्रष्ट छ । उनको त्यो नीति अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्व बजार सङ्कुचित हुँदै गएकाले र उत्पादन कम गर्दै लैजानु परेकाले पनि अमेरिकामा उत्पादन र मजदुरहरूमा पनि कटौती गर्दै जानु परेको परिणाम हो । विदेशबाट आउने मजदुर वा विज्ञहरूले पनि अपेक्षाकृत सस्तो ज्यालामा काम गर्दछन् । त्यसले गर्दा अमेरिकामा आप्रवासीप्रति कडा नीति अपनाउनु पर्ने जनमत बढ्दै गएको छ । त्यो मागलाई ट्रम्पले मूल रूप दिए । त्यसैले चुनावमा उनलाई बहुमत प्राप्त भयो ।
वास्तवमा आज नयाँ नयाँ देशहरूमा नयाँ पँुजीवादी देशहरूको विकासको परिणामस्वरूप अमेरिकाले विश्वमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु परी रहेको छ । त्यसले गर्दा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बढाउनेभन्दा देशभित्र आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्ने नीतिमा जोड दिएका छन् । साम्राज्यवादीहरूले भूमण्डलीकरण, खुला प्रतिस्पर्धा र खुला बजारको कुरा गर्दछन् । तर ठुला विकसित देशहरूमा पनि बढ्दै गएको सङ्कटका कारणले उनीहरूले संरक्षण नीतिमा जोड दिनु परी रहेको छ । त्यसरी उनीहरूले आफ्नो रक्षाको नीतिमा बढी जोड दिनु परी रहेको छ । त्यही प्रकारको स्थितिमा नै ब्रिटेन युरोपयन युनियनबाट हट्ने नीतिको पक्षमा बहुमत प्राप्त भयो । संसारमा जति जति नयाँ नयाँ देशहरूमा पूँजीवादको विकास हुँदै जाने छ, उनीहरूको बजार साँघुरिँदै जाने छ । उनीहरूका अगाडि उत्पादन घटाउने र श्रम शक्तिमा कटौती गर्नु पर्ने बाध्यता बढ्दै जाने छ । त्यो अवस्थामा सबै पँुजीवादी देशहरूमा आप्रवासीहरूप्रति ढोकाबन्दको नीति बढ्दै जाने छ ।
ट्रम्पको अनुदार र कडा नीतिको शिकार ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू पनि हुनेछन् । त्यो समस्याको गम्भीरता त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहने छैन । त्यो समस्या विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आउने छ । एकातिर, सबै विकसित पँुजीवादी देशहरू र अर्कातिर, नयाँ पँुजीवादी देशहरूबाट नेपालीहरूलाई निकाल्ने प्रक्रिया बढ्दै जाने छ । अमेरिका र युरोपमा ता त्यो आवाज बढ्दै गई रहेको र त्यहाँका सरकारहरूले झन्‌पछि झन् अनुदार आप्रवास नीति अपनाउँदै लगी रहेका छन् । आउने दिनमा त्यो प्रक्रिया अरू बढेर जाने छ ।
अहिले नेपालीहरूको गन्तव्य कतिपय पँुजीवादी देशहरू पनि रहेका छन् । जस्तै कि खाडीका मुलुकहरू मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया आदि । ती देशहरू पनि हाम्रा लागि सधैँ सुरक्षित देशहरू रहने छैनन् । प्रथमता, त्यहाँ अन्य देशहरूका आप्रवासीहरूसित नेपालीले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने छ । द्वितीय, कुनै दिन त्यहाँ पनि विकसित पँुजीवादी देशहरूमा जस्तै स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा ती देशहरूमा रोजगारीको समस्या गम्भीर हुँदै गएर त्यहाँ पनि विदेशबाट आउने मजदुरहरूप्रति विरोधको आवाज बढ्न थाल्ने र त्यसरी त्यहाँ पनि नेपालीहरूका लागि रोजगारी कम वा सीमित हुँदै जाने छ ।
गत दशकहरूमा नेपालीहरू कैयौँ देशहरूबाट निकालिएका थिए । तत्कालीन बर्मा वा म्यान्मारबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू निकालिएका थिए । आसामबाट आफ्नो घरजग्गा वा व्यापार छाडेर ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू नेपाल आउनु परेको थियो । हाम्रो रोजगारीको परम्परागत गन्तव्य भारत रहँदै आएको छ । तर त्यहाँ पनि पहिले नेपालीहरूले जसरी रोजगारी पाउँदथे, अब पाउँदैनन् । ठुला र राम्रा ठाउँमा नोकरी प्राप्त गर्ने कुरा त अब बन्द जस्तै भएको छ । भारतमा जनसङ्ख्या र बेरोजगारी बढ्दै जानुका साथै उनीहरूलाई पहिले जस्तो सजिलैसित नोकरी मिल्न गाह्रो हुन थालेको छ ।
सारा संसारबाट लखेटिँदै वा विस्थापित भएपछि नेपालीहरूका लागि बाँच्न वा रहनका लागि बाँकी रहने आश्रय स्थल नेपाल मात्र हो । खालि विदेशमा नेपालीहरूलाई पठाएर मात्र अर्थतन्त्रलाई कायम गर्ने नीति अपनाइयो र स्वयं नेपालको आर्थिक विकासमा ध्यान दिइएन भने त्यसको परिणाम कति भयानक होला ? कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । नेपालीहरू संसारभरिबाट लखेटिँदै र निकालिँदै जाने र, अर्कातिर, नेपालको विकास नहुने भयो भने त्यसले नेपालका लागि अत्यन्त भयानक स्थितिको सिर्जना गर्ने छ ।
मिति ः २०७३ कार्तिक ३० गते